Kumaandooska DFS ayaa weeraray Xarun Ay alshabaab Leeyihiin…….. – Kismaayo24 News Agency
by Mohamed Abdirashid Abaajo 8th March 2019 058
Ciidamada kumaandooska Soomaaliya oo garab ka helaya ciidamada Mareykanka ayaa xalay saq dhexe weerar qorsheysan ka geystay deegaano ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe.
Weerarka oo ahaa mid qorsheysan ayaa lala eegtay saldhiga Al Shabaab ay ku leeyihiin Shabeelaha Dhexe oo ah kan ugu weyn ee ay ku qaadaan xukunada kala duwan, waxaana la sheegay in khasaaro uu gaaray, sida ay sheegeen xubno ka tirsan Hirshabeelle.
Weerarka ayaa waxaa barbar socday duqeyn diyaaradaha dagaalka ay ka fuliyeen deegaanka, waxaana lagu waramayaa in lagu dilay ku dhawaad 10 ruux oo ay ku jiraan saraakiil Al Shabaab ah.
Ciidamada huwanta ah ayaa la sheegay inay u degteen deegaanka, halkaasi oo weerar iska hor imaad ahaa uu ka dhacay, waxaana beegsiga weerarta uu ahaa saldhig ciidamada Al Shabaab ku leeyihiin deegaanka.
Al Shabaab ayaa deegaanka Gamboole ku qaada xukunada kala duwan ee deegaanada Shabeelaha Dhexe, waxaana dadka looga yeeraa deegaankaasi marka ay dhaqaalo ka doonayaan.
XOG:- Xog: Cabdiweli Gaas iyo Axmed Madoobe oo u tanaasulay habka 4.5. doorashada inay noqoto
Tifaftiraha K24 20th January 2016
War hada: Maxaadan Ogeyn oo Madaxweynaha Jubbaland uu ka yiri Guushii Jawaari uu ka gaaray Xidig???